ပုံပြင်ပြောခြင်း၏စွမ်းအား | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Allon ကြယ်ပွင့်များကိုဖွဲ့စည်းရန် Siggraph အတွက် Maxon ၏ 3D နှင့် Motion Design Show
GB Labs သည် CORE.4 နှင့် CORE.4 Lite လုံခြုံရေးတို့ကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ဇာတ်လမ်းတွေကို The Power of
အဆိုပါ Big Bang အဖွဲ့တည်ရှိမှုသို့စကြဝဠာပတ်ချာလည်နှင့်လူသားတို့အတွက်နှားခြေးမွငျးခြေးထဲကတက် squirmed အစဉ်အဆက်ကတည်းကကျနော်တို့ကဇာတ်လမ်းပြောပြ၏အနုပညာကတဆင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏အနက်ရှိုင်းဆုံးအတွေးများနှင့်ခံစားချက်များကို shared ပါပြီ။ ပုံပြင်ငါတို့ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုဝေမျှကူညီပေးသည်။ သူတို့ကအကြောင်းကြား, ဖျော်ဖြေနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနိုင်ပါတယ်; တခါတရံလူအပေါင်းတို့မှာတစ်ကြိမ်။ ပုံပြင်ဟာနက်ရှိုင်းစွာပုဂ္ဂိုလ်ရေးထံမှနီးပါးတစ်လောကလုံးအရေးပါမှုအဲဒီအထိနိုင်ပါတယ်။ shared ပုံပြင်များတစ်ခုလုံးယဉ်ကျေးမှု '' ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုတန်ဖိုးထားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရှေးဟောငျးအီဂပုံပြင်များနှင့်မှတ်တမ်းများဂူရေးဆွဲပေါ်လာများနှင့်ရှေးဟောင်းသီချင်းများနှင့်ကဗျာများထဲမှာကြားသိနိုငျသညျ။ အအေးမိမှောင်မိုက်ညဥ့်အပေါ် fireside အားဖြင့်မျှဝေတီးတိုးလူထုပုံပြင်များ, ဒဏ္ဍာရီများနှင့်ဒဏ္ဍာရီသို့ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိခဲ့တစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။
အတော်များများကအစောပိုင်းအမေရိကန်စာရေးဆရာများနှင့်သူတို့၏အကျင့်ကိုကျင့်အတိတ်၏ codes တွေကိုနှင့်ပိုပြီးစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ နညျးလမျးမြားစှာတှငျဤစာရေးဆရာများနှင့်အကျင့်ကိုကျင့် Self-မှီခိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကအစောပိုင်းအမရေိသောတောအရပ်ယဉ်ဖို့ကိုယူပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးအမေရိကန်ဝိသေသလက္ခဏာပုံဖော်နှင့် hone ငှါရှာကြံလေ၏။ ရှေ့ဆောင်အခြေချထိုပြည်အနှံ့ပြန့်နှံ့အဖြစ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာရှိရမည်တစ်ခုနောက်ခံစိုးရိမ်ရှိ၏, ကသတ်မှတ်ရမည်, ကအနုပညာအထူးသဖြင့်စာပေကိုအကောင်းဆုံးဥပမာပေးအတူလိုအပ်ကြောင်းမပြည့်စုံကြောင်းခံစားရတယ်ခဲ့သည်။ ရဲ့အစောပိုင်းဇာတ်လမ်းတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာကြပါစို့။
ဖ်ဝေါ်လ်ဒိုအီမာဆန်, အကိုးရာစုအတွေအများဆုံးစာရေးဆရာများများထဲမှ "သစ်ကိုမရေိက" အမရေိက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လာများနှင့်ကွဲပြားစတိုင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံပေးမယ်လို့သေချာစေရန်ရှာကြံလျက်နေ၏။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခြေထောက်ပေါ်လမ်းလျှောက်တော်မူမည် ငါတို့သည်ငါတို့၏ကိုယ်လက်နှင့်ကိုယ်အလုပ်မလုပ်ကြလိမ့်မည် ငါတို့သည်ကိုယ်စိတ်ထဲတွင်ပြောပါမည်။ "
nonconformity နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူအမရေိကြည့်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒနှင့် ပတ်သက်. အီမာဆန်ရဲ့ကြေညာချက်များ၏စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူစောင့်ရှောက်မှာ, အီမာဆန်တာဝန်ဖို့နေ့၏စာရေးဆရာများထားပုံကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်။
စာပေအတွက်အမှန်တကယ် "အမေရိကန်" ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်မိမိခေါ်ဆိုခမှာ "အမေရိကန်ပညာရှင်," အီမာဆန်အတိတ်ပေါ်မှာငါတို့အားကိုးရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုဒုက္ခိတဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာညွှန်ပြနှင့်အတူစတင်သည်: အဖို့, "မှီခို၏ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာရှည်အလုပ်သင် သည်အခြားမြေများ၏သင်ယူမှုတစ်ဦးနီးကပ်ဖို့ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့အပြေးအလွှားဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါသန်းပေါင်းများစွာ, အမြဲတမ်း sere အပေါ်ကျွေးမွေးမရနိုငျနိုင်ငံခြားရိတ်၏ဖြစ်နေဆဲပင်။ သစ်ကိုအမေရိကန် "စာရေးဆရာအချို့စရိုက်များနှင့်သူ၏ဥရောပအဆွေတော်အနေဖြင့်ထိုသို့သောအားဖြင့်သစ်တစ်ခုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်ရှိသင့်" အီမာဆန်သည့်ယုံကြည် "။
အီမာဆန်ရဲ့တာဝန်ခံစာသားသည် "အချိန်ကာလ၏ဝိညာဉျ 'မှတ်တမ်းတင်သို့သူ၏အပေါင်းအဘော်ကစာရေးဆရာများအတင်းနှင့်ကမ္ဘာအတွက်မဆိုအခြားမတူဘဲအသစ်တခုဇာတ်ကောင်ကိုဖန်တီးရန်ကိုကူညီခဲ့သည်။ အမရေိကြည့်ဖို့အားလုံးအတှကျကမ်ဘာပြခန်းအတွက်ဂုဏ်ယူစွာဆွဲထားနိုင်ကြောင်းပန်းချီသစ်တစ်ခုစတိုင်ဖန်တီးရန်အနုပညာရှင်တွေစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကွက်လပ်ပတ္တူခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့သောစာရေးဆရာဂျိမ်းစ် Fennimore Cooper က, Edgar Allen ကဖိုးနှင့်ဝါရှင်တန် Irving ၏အကြိုက် (နှင့်အခြားသောသူများ) လည်းပါဝင်သည်။
Edgar Allen ကဖိုးဥပမာ, အီမာဆန်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်မထားဘူး။ မိမိအဆီသို့ incestuous overtones အတူရူးသွပ်အနုပညာရှင်: ကတဦးတည်းကအင်္ဂလန်မှထွက်မယ့်ပုံပြင်ကနေမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုလူအပေါင်းတို့သည်ပုံပြင်ဒြပ်စင်ပါဝင်ပတ်သက်အဖြစ် "Usher ရဲ့အိမ်၏ကျဆုံးခြင်း" ပိုကောင်းတဲ့အစားသစ်ကိုအမေရိကန်တွေထက်, ဟောင်းဥရောပတိုက်မှလိုက်ဖက်မယ့် Gothic ပုံပြင်ဖြစ်ပါသည် နှမ, နှစ်ပေါင်းများစွာအာရုံစူးစိုက်မှုမရှိခြင်း, ပင်တိုက်ရိုက်သင်္ချိုင်းကနေပြိုကွဲသော creepy ဟောင်းအိမ်ကြီး။ ဒါဟာပုံပြင်တစ်ခုမိုးသည်းထန်စွာအင်္ဂလိပ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ, ရှိတ်စပီးယား၏စတိုင်လ်ရန်အလွန်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါရှင်တန် Irving, အခြားတစ်ဖက်တွင်, အီမာဆန်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထားဘူး။ တွင် "Rip Van Winkle," ဥပမာအားဖြင့်, setting ကိုအမေရိကန်ဝိသေသလက္ခဏာဖန်တီးခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ မိမိအနောက်ခံအဖြစ် Hudson မြစ်ချိုင့်နှင့်အတူ Irving စကားပြောရပ်ရွာ၏ဘုံဒေသများရှိစုဆောင်းလူများပြောသော "နိုင်ငံသားများကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ-အဖွဲ့ဝင်များညီလာခံ-လွှတ်ခြင်း၏အခွင့်အရေးများအကြောင်းကို ... "
အဲဒါကို "Rip Van Winkle" ကိုလည်း Gothic ကဆိုသည်နိုင်သော်လည်းသူကအမေရိကား, ပိုမိုရှေးခေတ်ဥရောပပုံပြင်များ၏အစဉ်အလာများနှင့်စတိုင်တစ်ခု "မှောက်လှန်" အဖြစ်လူသိများသစ်ကိုနဲ့ထူးဆန်းတဲ့မြေများအတွက်တကယ်ကောင်းမွန်စွာသင့်လျော်မယ့်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းကိုပိုပြီးင် ။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဇာတ်ကောင်အလွန်လွယ်ကူစွာကိုလည်းအခြားအမှုအရာတို့ကိုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, Dame ဗန် Winkle ဥရောပနှင့်အဟောင်းနည်းလမ်းတွေကိုယ်စားပြုနိုင် - "။ termagant ဇနီး" တင်းကျပ်သော, စည်းမျဉ်းများနှင့်အမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူတစ်ဘက်မှာ "Times ကပိုဆိုးနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားကြီးပြင်း" နှင့်ကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် "ဟုဌာပနာမုဒေါသကိုအသက်အရွယ်နှင့်အတူ mellows ဘယ်တော့မှနှင့် ဒီအင်္ဂလန်၏ရူပါရုံကိုမပါရှိလျှင်တစ်ဦးချွန်ထက်သောလျှာသည်စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ Keener ကြီးထွားလာကြောင်းတည်းသောရှေ့ကနေကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ "ထို့နောက်ဒေသခံတည်းခိုခန်းကျော်သူ့ဘုရင်မင်းမြတ်ဂျော့ III ၏ပုံတူပြုလုပ် cinches!
အထူးသဖြင့်အရက်အတူပင်လယ်ရေကြောင်းခရီးရှည်အပေါ်ဘုံ - Rip တောင်တော်ကလူတွေ့နှင့် ( "ခရမ်းရောင်တောင်တန်းဘုရင်မင်းမြတ်" ထင်) သူတို့ကိုပူးပေါင်းမည်သောအခါ, အခြားတပါးသောပြည်တစ်ခရီး၏ဆင်တူသည်။ နှိုးခြင်းနှင့်အချိန်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအရာတို့ကိုပြောင်းလဲသွားဖူးရှာတွေ့ဖို့ရွာဆင်းသူလုပ်ငန်းများကျော်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အဆိုပါရွာသူ့ကိုနိုင်ငံခြားသလိုပဲကြောင်းအရိပ်လက္ခဏာပေါ်သူတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးခဲ့သောနေအိမ်များသူအသိအမှတ်မပြုခဲ့ပါဘူးအဆောက်အဦးများနှင့်ထူးဆန်းအမည်များပါရှိသော။
တကယ်တော့မဟုတ်တော့တည်းခိုခန်းပေါ်ကဘုရငျဂျော့ခ်ျဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝါရှင်တန်၏ပုံသဏ်ဍာနျ; လူအ "နိုင်ငံသားများကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ-အဖွဲ့ဝင်များမိန်းမောတွေဝေဗန် Winkle မှပြီးပြည့်စုံဗာဗုလုနျဗန်းစကားရာခုနစ်ဆယ်ခြောက်နှင့်အခြားစကားများကွန်ဂရက်လွှတ်ခြင်းအခွင့်-ဘန်ကာရဲ့တောင်ကုန်း-သူရဲကောင်းများ၏များ၏အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်. ။ " ပြောသော Dame ဗန် Winkle ၏သင်္ကေတဦးသေဆုံးခဲ့ အင်္ဂလန်မရှိတော့သည်သူ၏အသက်တာ၌ပါဝင်ပတ်သက်ခံရ, သူသည်အသစ်တခုပြည်ရွက်လွှင့်ခြင်းနှင့်နောက်ကွယ်မှသူ၏မိသားစုနှင့်အသိအကျွမ်းအချို့ကျန်ရစ်ခဲ့လျှင်အဖြစ်အနည်းငယ်အဟောင်းမိတ်ဆွေများနှင့်အိမ်နီးချင်းသူ၏သမီးနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။
rip ဇာတ်လမ်း၏အဆုံးမှာ "သစ်ကိုအမေရိကန်" ဖြစ်လာသည်။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာအမေရိကမှဤမျှလောက်များစွာသောကိုးကားရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံး, မိုဃ်းကောင်းကင်၌ရွှေလင်းတမြင့်တက်ခဲ့တယ် - အမေရိက၏အန္တိမသင်္ကေတ။ အစောပိုင်းအမေရိကန်အခြေချမိသားစု၏အရေးပါမှုကိုသဘောပေါက်; သူတို့ပထမဦးဆုံးအမရေိကရောက်လာသောအခါသူတို့ဘာမှခဲ့လျှင်, သူတို့သည်များသောအားဖြင့်အနည်းဆုံးနဲ့အခြားမိသားစုဝင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သစ်ကို (နှင့်ပုံဆောင်အမည်ရှိ) ပြည်ထောင်စုဟိုတယ်၌, Rip ကြယ်အစင်းတစ်အလံကိုတွေ့လိုက်တယ်။ သူထို့နောက်သူ၏သမီးနှင့်မြေးများနှင့်သူ့သားနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့သည်သောအခါသူငြိမ်ဝပ်ပိုပြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
"။ သစ်ကိုအမေရိကန်" ၏သင်တန်း, ရွှေလင်းတနှင့်မိသားစုတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း Rip ထောက်ပြသောသာသောအရာတို့ကိုမဟုတျပါ Rip ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကား, သူ says: "ငါသည်အခြားကိုယ့်ကိုယ်ကို-လြှံတစ်စုံတစ်ယောက်ဘူး" ပြီးတော့သူကဝန်ခံသည် "တိုင်းအရာပြောင်းလဲသွားတယ်ရဲ့, ငါပြောင်းလဲသွားတယ်တာပါ။ " သူကမရှိတော့ခဲ့ "သူ၏ဘုရင်မင်းမြတ်ဂျော့ခ်ျတစ်ခုဘာသာရပ်တတိယ, အခုသူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အခမဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့သည်။ "
ဒါဟာ Rip ရဲ့အိပ်မက်သူ့ကိုပြောင်းလဲသွားတော်မူကြောင်းကိုသိသာသည်။ သူကသူ့ရဲ့ "အဟောင်းလူတန်းစားပေါင်းစုံနှင့်အလေ့အထများ" ပြန်လည်စတင်နှင့်သူ၏များစွာသောတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့် "အဟောင်းခရိုနီ" ဟုသူကအစား၏မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များနှင့်အတူမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါလိမ့်မယ် "သစ်ကိုအမေရိကန်တွေ။ " ဟုသူကမြို့မှာအပေါငျးတို့သသားသမီးများ၏မိတ်ဆွေတစ်ခဲ့တာကိုဘယ်လိုဆင်တူဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း ယခင်က, သူတို့ရဲ့အားကစားသူတို့နှင့်အတူကူညီကစားစရာ, ဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်းနှင့်ပြက်လုံးများ၏အပျော်အပျက်တင်းပါးဖြစ်ခြင်း, သူမြို့ဘိုးဘေးဖြစ်လာသည်နှင့်ထံမှပုံပြင်များကိုပြောသည် "စစ်ပွဲမတိုင်မီ။ " Irving သူဘာကိုနားလည်ပေးနိုင်ခဲ့ရှေ့မှာ "တချို့အချိန်" ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည် သူကတကယ်တော့အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကသူ၏လက်ရှိရာအရပျနားလညျပွီးနားမလည်ခဲ့ဘူးနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ခဲ့ရသည်, ရေးရာ၏လက်ရှိပြည်နယ်ဖြစ်ပျက်သို့မဟုတ်နားမလည်။ သူ၏ဇနီးသွားကြောင်းသူကရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း "လူအရေးမယူနှင့်အတူပျင်းရိစေနိုင်ပါတယ်သည့်အခါပျော်ရွှင်အသက်အရွယ်" ဟုသူကအလိုရှိအဖြစ်လာသွားနိုင်ကြောင်း, မိသားစုတွေရဲ့နှစ်သိမ့်ခဲ့ရပြီးသူကပေါင်းသင်းမည်ဟုအဘယ်သူကိုနှင့်အတူရွေးကောက်ခဲ့သည်။ rip နောက်ဆုံးတော့အကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့သည် - သူသည်ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာကြီးလမ်းမှတစ်ဝေးအျောဟစျသံ။
တော်လှန်ရေးနေ့ပြီးနောက်အမေရိကန်ဝိသေသလက္ခဏာအတွက်အပြောင်းအလဲများအသုံးအနှုန်းများမှာအပြောင်းအလဲအရာများစွာကိုသို့ပတျသကျ။ Rip အိပ်ပျော်အပြီးနှိုးခြင်းနှင့်မြို့၌မိမိအကြိုက်ဆုံးသက်သေမပေါ်သွားသည့်အခါဥပမာ,, သူက "handbills အပြည့်အဝကသူ့အိတ်ကပ်နှင့်အတူတစ်ဦးပိန်, bilious-ကြည့်သူချင်း, ကိုမြင်, နိုင်ငံသားများကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ-အဖွဲ့ဝင်များကကွန်ဂရက်၏အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်. ပြင်းထန်စွာ [ငြင်းခုံ] ။ -liberty-ဘန်၏တောင်ကုန်း-သူရဲကောင်းများခုနစ်ဆယ်ခြောက်နှင့်အခြားစကားများသူတို့တွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ "inalienable အခွင့်အရေးများ" ဒီလိုင်းခုနှစ်တွင်ဖြစ်လာခဲ့သည်သောအမေရိကန်ဝိသေသလက္ခဏာများစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ": အဆိုပါစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် (handbills), ဘီလ် (ရွေးကောက်ပွဲများ) မဲဆန္ဒပေးခြင်းငြ့်အရေးဆိုင်ရာ (နိုင်ငံသားများ၏အခွင့်အရေးများ), အမျိုးမျိုးသောလွတ်လပ်မှုအတွက် (လွတ်လပ်ခွင့်) ၏ "နှင့်တစ်နည်း;" ဘယ်တော့မှမတိုင်မီအမေရိကန်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောတစ်အာမခံချက်ရှိခဲ့သညျ။ သူတို့ကဘုရင်ကဂျော့ခ်ျ၏အုပျခြုပျမှုအောကျတှငျရှိကြ၏, သူတို့သညျမိမိထငျမှဘာသာရပ်ဖြစ် စိုးရိမ်. သာ, သူတို့ကိုသူ၏လမ်းမှထွက်နဲ့သူ့စိတ်ထဲထဲကနေဖို့နိုင်မယ်လို့ကျနော်တို့မျှော်လင့်နိုင်ဘူး။ ပြည်သူ့လုံခြုံဟုခံစားရနှင့်သူတို့၏ဘဝအသက်တာ၌အရေးကြီးသောအရာတို့ကိုစိုးရိမ်နိုင်တယ်လို့ - မဟုတ်ဘဲသူတို့တစ်တွေအာဏာရှင်ရှင်ဘုရင်၏အာဏာရှင်ဆန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုမှကာကွယ်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်စေမထက်, သူတို့ရဲ့မိသားစုနှင့်၎င်းတို့၏လယ်ယာမြေသို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။
နိုင်ငံရေး၏အရေးပါမှုကိုလည်းအသစ်များကိုအမေရိကန်ဝိသေသလက္ခဏာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Rip ဟိုတယ်တွင်ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုအတွက်ပေါင်းသင်းရခဲ့သည်နှင့်သူနှစ်ဦးကိုရေပန်းစားပါတီများထိုအချိန်က "ဖက်ဒရယ်သို့မဟုတ်ဒီမိုကရက်ပါတီ" ဟုသူက (ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ) မဲပေးပုံကိုမေးသော်သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ရှိမရှိခဲ့သည်ရှိရာဤသည်ထင်ရှားဖြစ်၏။
အီမာဆန်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေ့ဆုံကြောင်းခက်ခဲသည်မဟုတ်။ ဝေးအဟောင်းကမ္ဘာမှ Breaking နှင့်လူတွဲလာခဲ့တဲ့အဟောင်းကမ္ဘာတွင်အစဉ်အလာခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ တချို့ကစာရေးဆရာများကိုအခြားသူများမဟုတ်ကြ, အမှိုကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်။
တွင် "ကိုယ်ပိုင် Reliance," အီမာဆန် "အကြင်သူသည်လူ nonconformist ဖြစ်ရမည်လိမ့်မည်။ ", မိန့်တော်မူ၏ဒါဟာအစဉ်မပြတ်ထူးခြားသည် "သစ်ကိုအမေရိကန်" ခွဲခြားသတ်မှတ်မယ်လို့ကွဲပြားပြသသည့်အမေရိကန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖန်တီးဖို့စာရေးဆရာများစိန်ခေါ်အီမာဆန်မောင်းသောဤအယူအဆဖြစ်ပါသည် အဘယ်သူသည်ထို့နောက်ကမ္ဘာ၏ယဉ်ကျေးမှုများအကြားသူ၏နေရာကို ယူ. , တစ်ချိန်တည်းမှာ, မတ်တပ်ရပ်-ထွက်သူ့ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းအဖြစ်နိုင်ဘူး။
Irving အီမာဆန်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုယူနှင့်ကဖြည့်ဆည်းပေမယ့်ရိုက်နှက်မသာနိုင်ခဲ့တယ်။ မိမိအဇာတ်လမ်း, "Rip Van Winkle" ဟုအဆိုပါစမ်းသပ်မှုဖြတ်သန်းနှင့်အီမာဆန်ရဲ့ဝံ့ကျော်လွှားမှာ Irving ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုသေတမ်းစာနှင့်အသက်သေဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ကစာရေးသူအသစ်က, အခြားသူများမဟုတ်ကြမှအဟောင်းကိုကမ္ဘာကြီးထဲကနေအကူးအပြောင်းကိုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည် ဖြစ်. , ဝါရှင်တန် Irving, Rip Van Winkle နှင့်သူ၏သည်အခြားပုံပြင်များမှတဆင့်, ပိုမိုအောင်မြင်သောတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥရောပပုံစံလုပ်ဆောင်ရမှာတွေနိုင်ခဲ့ကြတယ်သူများသည်အဆိုပါထူးခြားသောအသွင်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အဖြစ်လူသိများခံရဖို့လာတော်မူကြောင်းကိုဇာတ်ကောင်သတ်မှတ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ် "အမေရိကန်စာပေ။ "
ဤရွေ့ကားစာရေးဆရာများအဆိုပါဇာတ်လမ်းပြောပြယာဉ်ဖောက်လုပ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့မူလအမြစ်မရှိရင်, များစွာသောခေတ်သစ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်။
ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏ဆက်လက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းချဖြစ်ခဲ့သည်။ အလယ်ပိုင်း 1890s မီ, အရှိဆုံးစွဲငြိဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းပြောပြတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပြဇာတ်ရုံဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်အသစ်တစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းဖွင့ ်. , အသံတိတ်ရုပ်ရှင်။ ဇာတ်လမ်းတွေနည်းပညာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏အဓိက input ကို (မျက်မှောက်) မပြည့်စုံနိုင်နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သက်သက်သာစက်မှုနည်းလမ်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ရှိရာအမှတ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နှောင်းပိုင်း 1920s ခုနှစ်တွင်, (အသံသည်နှင့်အတူ) စက်မှုရုပ်မြင်သံကြားထင်ရှား။ , အကြမ်းအားဖြင့်ငါးနှစ်အကြာတွင်, အသံလည်းရုပ်ရှင်ရုံ၌ထငျရှား; ဇာတ်လမ်းပြောပြဘို့ငါတို့အများဆုံးအဆင့်မြင့် tools တွေကိုယခုနှစ်ဦးစလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလတန်းကျောင်းအာရုံကျေနပ်။
မကြာခင်မှာပဲသောနောက်, စက်မှုရုပ်မြင်သံကြား၏ကျယ်ပြန့်အစားထိုးသက်သက်သာအီလက်ထရောနစ်ဗားရှင်းသို့ပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ Advanced တိုးတက်အောင်ထားရှိမည်နှင့် 1950s အသုံးပြုပုံအသံလွှင့်အရောင်ဓါတ်ပုံတွေကိုလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ 50 ရဲ့အစတစ်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ကွန်ပျူတာများချိတ်ဆက်များ၏ concept ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ကနဦးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုဖြတ်ပြီးစစ်တပ်နှင့်အဓိကတက္ကသိုလ်များ (ဥပမာ "ဒီက World Wide Web,") ကတွင်ရှိသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ 70 ရဲ့အစောပိုင်းအသုံးပြုပုံအရောင်ရုပ်မြင်သံကြားဖို့တစ်လောကလုံးအကူးအပြောင်းနီးပါးပြည့်စုံခဲ့ပါတယ်။ 80 ရဲ့နှောင်းပိုင်းအသုံးပြုပုံစီးပွားဖြစ် ISP ၏ပေါ်နေတော့တယ်။ ကွန်ပျူတာများအစဉ်အမြဲတိုးနှင့်တိုးမြှင့်ခေတ်သစ်မီဒီယာတိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက် ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီး, မျက်မှောက်၌အဘယ်သူမျှမဆုံး။
တစ်ခုတည်းနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်အလတ်စားအဘယ်သူမျှမပုံပြင်များမှသီးသန့်ပြောဆိုချက်ကိုချနိုင်။ အက်ဒီဆင်နှင့် Farnsworth တူသောတီထွင်သူနှင့်ရှေ့ဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ကိုဇာတ်လမ်းပြောပြ၏ရှေးဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်လူ့ဇာတိယူဆောင် - ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ရုပ်ရှင်နှင့် Serial နှင့်အတူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်များအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အင်တာနက်များမှတဆင့်။ ရုပ်ရှင်များ, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အင်တာနက်ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏မှုတွင်မှာယခုဖြစ်ကြသည်။ ပုံပြင်အားလုံးမီဒီယာအကြောင်းအရာကိုဖန်ဆင်းသောများ၏ DNA ကိုဖြစ်ကြသည်။ မပါဘဲ အကြောင်းအရာ, မီဒီယာအတွက် data အားလုံးကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအနတ္တဖြစ်၏။ ဒေတာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ bit နဲ့က byte က၎င်း၏ထုတ်လုပ်သူရဲ့ခမ်းနားရူပါရုံကိုပြသသော (မျှော်လင့်) ကြွယ်ဝသော၎င်းပြင်ဆင်တဲ့သေးငယ်တဲ့ချည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ content တွေကိုဖန်တီးသူကိုမျှဝေချင်သောပုံပြင်များနှင့်သင်ခန်းစာများကိုဘာတွေလဲ?
ဇာတ်လမ်းတွေကိုအဘယ်သူမျှမပြတ်လပ်မှုရှိပါသည်။ အဆိုပါ 20th စာပေ, ဇာတ်စင်, ငွေ screen နဲ့သေးငယ်တဲ့ screen ကိုအတွက် - - စာရင်းပြုစုဖို့လည်းပင်ပန်းရာစုမြောက်မြားစွာဇာတ်လမ်းတွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ 2019 Las Vegas မှာမှာပုံပြင် NAB ပြရန် သူတို့ကမီဒီယာအသိုင်းအဝုိင်းအတွက်အကူအညီရချင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ သူတို့၏ ပုံပြင်များကိုထုတ်။ အလွန်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကသင်၏ပုံပြင် Teller တစ်ဦးက Epic ခရီးပေါ်တွင်သင်၏သူရဲကောင်းတလျှောက်နောက်ကိုလိုက်ကူညီဖို့တီထွင်ဖန်တီးမှုများ၏မီးလောင်ကျွမ်းမှုထိုးကူညီပေးပါမည်။ လူအပေါင်းတို့သည်နည်းပညာကိုကမ္ဘာ့အဆက်မပြတ်တိုးချဲ့မီဒီယာကိုထောကျပံ့မှတက်ပေါက်နှင့်အတူ, ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏သိပ္ပံနောက်ဆုံးတော့အပြည့်အဝဇာတ်လမ်း၏အနုပညာများ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ထလိုက်ပါတယ်။ မရှိတော့ကြောင့်ဆိုးကျိုးများဝန်ကိုထမ်းရွက်ရုပ်ရှင်ဖြည့်စွက်ဖို့ကအဓိကစတူဒီယိုလိုအပ်ပါဘူး။ ပိုပြီးအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အတူ, သေးငယ်တဲ့စတူဒီယိုနှင့်ပင်တစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းအရာတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ပိုများသောခရီးဆောင်နှင့်ပိုပြီးကြမ်းတမ်းအသစ်တပ်ဆင်ထားဇာတ်လမ်းပြောပြခွင့်အလမ်းများကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်။
သင်အကြိုက်ဆုံး "YouTube" စွမ်းရည်၏2terabytes အတူကြမ်းတမ်း Ultra-အမြန် SSD ကိုအတူပြီးမြောက်စေခြင်းငှါ, ဘာတစ်ခုသို့မဟုတ်လျင်မြန်သွက်လက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မှပူးတွဲအသေးစားကင်မရာဖြင့်အောင်မြင်သော By နိုင်ဝေဟင်သောအရာကိုဘားဂျွမ်းအတတ်ဆိုပါစို့။ လူ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းအပြည့်အဝတိုက်ဖျက်မည်နိုင်ပါတယ်သည့်အခါအသစ်တစ်ခုကိုအဘယျသို့ဇာတ်လမ်း Teller ယာဉ်၏အထွဋ်ယခုရောက်ရှိဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း NAB ပြရန် ဤအခြင်းနှင့်အခြားအလားအလာဆိုင်များတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးချဲ့ကမ္ဘာကြီးမီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များကိုကူညီပေးဖို့အခွင့်အလမ်းကြိုဆိုသည်။
2015 2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး ဆူညံသံလျော့ချခြင်း Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit UHD / 4K / HD ကို viarte Warsaw ကို 2019-01-25
ယခင်: Video Editor International
နောက်တစ်ခု: Video Editor International